FBC - Lammiilee naannoo balaaf saaxilamoo jiraatan duursanii balaarraa eeguuf ni hojjetama-Dooktar Nagarii
Lammiilee naannoo balaaf saaxilamoo jiraatan duursanii balaarraa eeguuf ni hojjetama-Dooktar Nagarii
Finfinnee, Bitootessa 9,2009(FBC) – Magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa Kolfee Qaraaniyoo barmaatan naannoo Qoshee jedhamutti balaan qaqqabe magaalichaaf qofa osoo hin taane biyyattiin waan irraa barachuu qabdu ta’uu itti gaafatamaan ministiraa Waajjira Dhimmoota Koomuniikeeshinii Mootummaa Federaalaa Dooktar Nagarii Leencoon himan.
Ministirichi akka jedhanitti lammiilee maatiin isaanii jalaa miidhaman dhaqqabuun deeggaruu fi dhaabbiin of dandeessisuuf hojjechuun akka barbaachisus eeraniiru.
Lammiilee magaalattiitti qarqara lagaarra jiraataniifis yaaduun tarkaanfii dafanii fudhachuun ni barbaachisa jedhan.
Bifa waaraa ta’een garuu maastar plaaniin magaalattii dhiyeenya ragga’ee hojiirra oolu furmaata akka qabu himan.
Yuunvarsiitiin Teeksaasii fi Yuunvarsiitiin Finfinnees rakkoo naannoo Qosheetti mudate adda baasuuf akka qoratan hojjetamaa jira jedhan.
Naannoo Gaambeellatii hidhattoonni Sudaan Kibbaa gosa Muurlee daa’imman fudhatan ilaalchisees yaada laataniin, 6 deebi’uu isaanii eeruun, loowwan 185 deebisiifamaniirus jedhan.
Dhimmicharratti mootummaa Sudaan Kibbaa waliin qindoominaan hojjetamaa akka jiru kan himan Dooktar Nagarii Leencoo, gochichi mootummaa biyyattiis bakka kan hin buunen kaasan.
Biyyoonni fooramii qindoomina waliigaltee laga Abbayyaa, waliigalticha mana maree isaanitiin akka raggaasisanii fi hojiirra oolmaa isaatiif Ityoophiyaan xiyyeeffannaan hordofaa jirtis jedhan.
Walitti dufeenya Eertiraa fi Ityoophiyaan qabanirratti jijjiirramni imaammataa akka hin jirre eeruun, hariiricha fooyyessuuf garuu qorannoon imaammataa gaggeeffamaa jira jedhan.
Koorporeeshiniin Broodkaastiingii Ityoophiyaa akka gabaasetti waldhabbiin daangaa naannoo Oromiyaa fi Somaalee Ityoophiyaa jidduu jiru lafaan kan walqabate ta’us, naannoleen lameen mootummaa federaalaa waliin qindoomanii hojjechuun dhimmicha tasgabbeessuun danda’ameera jedhan Dooktar Nagariin.
Qaamolee walitti bu’iinsicha kaasanii fi akka babal’atu taasisanirratti mootummaan tarkaanfii akka fudhatu himaniiru.
Oduuwwan Biroo « Preezdaantiin Jibuutii daawwii hojii guyyoota 3 xumuruun gara biyya isaanii deebi'an	Paartileen dhimma mariisituu waltajjii marii fi falmiirratti osoo walii hin galin adda ba’an »